पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अल्ट्रा म्याराथन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अल्ट्रा म्याराथन
on: २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:२० प्रदेश समाचार
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अल्ट्रा म्याराथन
तनहुँ (अस) । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले खेलकुद पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । वैशाख २९ गते शनिवार जिल्लाको पर्यटकीय स्थल मानहुँकोटदेखि पुलिमराङसम्म ४४ किलोमिटर लामो अल्ट्रा म्याराथन आयोजना गर्ने भएको हो ।
खेलकुदमार्फत ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्वका स्थानको पहिचानमा पनि अल्ट्रा म्याराथनले सघाउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्तरमा मानहुँकोट र पुलिमराङजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार बढाउन देशका सबै ठाँउबाट खेलाडी सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको कार्यक्रम संयोजक मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
नगर प्रमुख न्यौपानेका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने खेलाडीलाई क्रमशः रू. ७५ हजार ७५, ५५ हजार ५५, रू. ३५ हजार ७५ प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सान्त्वना हुने ५ जनाले जनही १० हजार ७५ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले बताएका छन् ।